Tahiry isam-bolana Avrily 2015 1 Lahatsoratra Septambra 2014 1 Lahatsoratra Jona 2014 1 Lahatsoratra Desambra 2013 3 Lahatsoratra
Novambra 2013 1 Lahatsoratra Oktobra 2013 1 Lahatsoratra Jolay 2013 1 Lahatsoratra Avrily 2013 1 Lahatsoratra Janoary 2013 3 Lahatsoratra
Jona 2012 1 Lahatsoratra Marsa 2012 1 Lahatsoratra Febroary 2012 1 Lahatsoratra Janoary 2012 1 Lahatsoratra Novambra 2011 1 Lahatsoratra Marsa 2011 1 Lahatsoratra Jolay 2010 1 Lahatsoratra Jolay 2008 2 Lahatsoratra
Desambra 2007 1 Lahatsoratra Novambra 2007 1 Lahatsoratra Tantara misongadina mikasika ny Paortiogaly	Mpanao Gazety Gineana Nanjavona Tampoka Tany Angola Aiza i Milocas Pereira? Manako eran'ny tambajotra sosialy izany fanontaniana mikasika fanjavonana mpanao gazety sy mpampianatra amin'ny anjerimanontolon'ny tanànan'i Luanda, renivohitr'i Angola izany, toerana nipetrahany hatramin'ny 2004. Ety anaty aterineto, natomboka ny fanangonan-tsonia havantana ho amin'ny Kaomisiona Ambonin 'ny Firenena Mikambana misahana ny Zon'Olombelona.
01 Desambra 2013 Espaina : Tsy Hita Izay Meloka Tamin'ny Faharendrehan'i ‘Prestige’ Mpanoratra Lourdes Sada · Espaina 31 Janoary 2013 Mpanao Gazety Gineana Nanjavona Tampoka Tany Angola Mpanoratra Madalena Sampaio · Afrika Mainty 20 Oktobra 2012 Fahirano Ny Antenimera Portiogey: “Tsy Tetibolanay io” Mpanoratra Sara Moreira · Fanoherana Tantara Malaza Indrindra Manerantany 5 andro izayAzia AtsimoMety Ho An'ireo Fiteny Rehetra Any Azia Atsimo Ny Rindrambaiko OCR (Optical Character Recognition) An'ny Google
Tantara mikasika ny Paortiogaly 23 Avrily 2015
Angolà: Miatrika Fitsaràna Momba Ny Fanadihadihana Ny “Diamondra Mihoson-drà” Ilay Mpanao Gazety Nahazo Loka Mpanoratra Nani Jansen · Angola Nandray anjara tamin'ny fanaovana ity tatitra ity i Jonathan McCully. Ny volana lasa teo, nomena ny Lokan'ny Fitorohana ny Famerana ny Fahalalahana Miteny an'ny fanaovan-gazety i Rafael Marques de Morais, noho ny “fanaovan-gazetiny mihatra amin'ny fiainana, hafa noho ny an'ny rehetra ary ny fanadihadiana nataony tsy nisy fahadisoana” ao amin'ny firenena niaviany,...
SARIPIKA: Olombelon'i Portiogaly Mpanoratra Sara Moreira · Hevitra Ndeha isika hamantatra ny sasany amin'ireo olombelona izay monina na mandalo ao Portiogaly.
Fihaonana Miaraka Amin'ny Global Voices! Mpanoratra Eduardo Avila · Ejipta Mandritra ny volana Novambra sy Desambra, mikarakara "fihaonana" enina mivantana izahay izay tantanina sy entanin'ireo mpikambana ao amin'ny Global Voices
Portiogaly : Fifidianana Manamarina Ny Tsy Fitokisan'ny Olona Ireo Antoko Politika Mpanoratra Hugo Ferro · Fanoherana Tsy fahatongavana mifidy, vato maty, vato fotsy ary mpifaninana tsy miankina. Ireo no safidin'ny antsasa-maherin'ny mpifidy tamin'ny fifidianana farany teo tany Portiogaly.
Nolavin'ny Fitsarana Avo Momba Ny Lalàm-panorenan'i Portiogaly Ireo Fepetra Fitsitsiana Mpanoratra Sara Moreira · Fitantanam-pitondrana Nolavin'ny [pt] Fitsarana Avo Momba ny Lalàm-panorenana ao Portiogaly ireo fepetra fitsitsiana noheverin'ny governemanta fa ilaina mba hameno ireo fepetrany mikasika ny lamina ho fanitsiana tetibola mitentina 78 miliara euro, izay mbola manokatra lavaka [amin'ny teny anglisy] eo amin'ny 1.3 miliara euro ao amin'ny tetibola 2013-n'i Portiogaly.
Tontolo Arabo: Al-Andalus: Firodanana sa Fahazoana Indray? Mpanoratra Tarek Amr · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana Isaky ny faharoan'ny volana Janoary, ankalazaina ao Grenada ao Espaina ny “El día de la Toma de Granada” (andro nakàna an'i Grenada). Tamin'izany andro izany tamin'ny taona 1492, nandao ny Emirà Grenada i Muhammad XII (Mpanjaka Boabdil). Nahazo ny saikanosy iberiana ny kalifà (fiandrianan'ny mpanjaka Islamo) Omayyady tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-valo, ary nampitsahatra ny...
Tselatra mikasika ny Paortiogaly
12 Janoary 2013HevitraNy Hasambarana Isan'Andro Isan'Andron'ireo Zokiolona
16 Janoary 2008HevitraTontolom-pitenenana Portiogey: Arahabaina i pimenta negra nahatratra tsingerintaona
12 Janoary 2008Fitantanam-pitondranaPaortiogaly : Voafitaka izahay
Asehoy daholo Tselatra mikasika ny Paortiogaly »Araho Twitter